u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya
Ukapteni wama-Momentum Proteas, u-Dané van Niekerk ukulindele ukudlala phambi kwabalandeli base-South Africa njengoba iqembu lakhe lilungiselela ukudlala ne-India kumdlalo wokuqala wemidlalo emithathu yama-One-Day Internationals (ODIs) e-Diamond Oval e-Kimberly kusasa.
Okokugcina lamaqembu ebhekana e-South Africa, izivakashi zanqoba i-triangular-series eyadlalwa ngonyaka odlulile e-Potchefstroom. u-Van Niekerk uthemba ukuhola iqembu nejngoba befuna ukuziphindiselela njengoba u-Hilton Moreeng neqembu lakhe befuna ukuqhubeka nokwenza kahle kwikhilikithi yomhlaba.
“Sikubhekile ukudlala ne-India, ikakhulukazi ekhaya lapho engizwa ukuthi kuzomele sisebenzise isimo sokudlala,” ekhuluma ebusuku ngaphambi komdlalo ngakusasa.
“Siyawathemba amathuba ethu sidlala neqembu elinamandla lase-India futhi sizongena kule-series sazi ukuthi sinikwe ithuba lokuziphindiselela emuva kokuhlulwa kwi-tri-series e-Potchefstroom onyakeni odlulile ngaphambi kwe-World Cup. Kulonyaka odlulile, ngicabanga ukuthi sikhombise ukuthi singenzani futhi ngicabanga ukuthi ukudlala ekhaya kuzosinika ukugqugquzeleka ukuthi siqhubeke nemidlalo yethu emihle.”
Ukapteni, owahola ama-Proteas kwi-semi-final onyakeni odlulile kwi-ICC Women’s World Cup e-England, uthe lama-One Day Internationals amathathu abalulekile eqenjini njengoba befuna ukugwema ukungena kulomqhudelwano womhlaba ngama-qualifiers. Yonke imidlalo kule-series izoba ingxenye ye-ICC Women’s Championship, ukungena kumqhudelwano ka-2021 ozodlalelwa e-New Zealand.
“Kubalulekile ukuthi siyinqobe le-series ekhaya sidlala ne-India, singenzeli abalandeli kuphela kodwa senzele nathi ukuthi sithole amaphuzu ngoba asifuni ukuphinde singene kuma-qualifiers. Sifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi siphumelela ngokushesha futhi lokho kusho ukuthi kumele sinqobe lemidlalo esiyidlala namaqembu amahle njenge-India.”
Iqembu lizolandela umdlalo wakusasa nge-ODI yesibili ezodlalwa ezinsukwini ezimbili ezilandelayo enkundleni efanayo, umdlalo wokugcina uzodlalwa e-Senwes Park e-Potchefstroom ngoMgqibelo, 10 February.
i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba AmaProteas esifazane anezinombolo ezincomekayo i-CSA ihalalisela amaProteas amathathu ngokufakwa eqenjini le-ICC WWC AmaProteas Women azingela ukuqopha umlando u-Luus ubheka okuhle ngaphambi kwe-semi-final yamaProteas esifazane Australia iqhubeka nokungahlulwa ibhekene ne-South Africa AmaProteas abesifazana alungele umdlalo ne-Australia uMoreeng ujabuliswa okunqotshwe amaProteas abesifazane okwamanje uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba